Otu esi amata nwata na -egbu egbu | Bezzia
Maria Jose Roldan | 10/09/2021 22:20 | Na-akụziri ụmụaka ihe
Ịxicụbiga mmanya ókè abụghị nsogbu na -eme naanị ndị okenye, ebe ọ bụ na enwere ike ịbụ ụmụaka na -egbu egbu. Nwata nwere nsogbu akparamagwa nwere ike bute nnukwu mgbagha n'ezinụlọ.
Ọ bụrụ na nne na nna achọpụta na nwa ha nwere ụfọdụ omume na -egbu egbu, ọ dị mkpa ịhụ ọkachamara ozugbo enwere ike, iji dozie nsogbu omume dị otu a. N'isiokwu na -esonụ, anyị ga -agwa gị àgwà dị iche iche nke ụmụaka na -egbu egbu ma ọ bụ ndị ọchịchị aka ike na ihe ị ga -eme ha.
1 Otu esi amata nwatakịrị na -egbu egbu ma ọ bụ onye aka ike
2 Kedu ihe kpatara ụmụaka na -egbu egbu
Otu esi amata nwatakịrị na -egbu egbu ma ọ bụ onye aka ike
O sighị ike ịmata nwa na -egbu egbu ebe ọ bụ na ọ na -emekarị ihe ike karịa ka ọ dị na mbụ ha anaghị asọpụrụ ndị isi. Ọ bụ ihe dị mma na n'ọnọdụ a, mmekọrịta nne na nna na-emebi emebi kemgbe ọtụtụ afọ. Mgbe ahụ anyị ga -egosi gị n'ụzọ zuru ezu, njirimara kachasị nke ụmụaka na -egbu egbu:
Akparamagwa ma ọ bụ njirimara bụ imebi ikike ma wụpụ iwu etinyere n'ime ezinụlọ. Ha na -eme ihe masịrị ha n'agbanyeghị ihe ndị ọzọ kwuru.
Ha anaghị ajụkarị azịza maka na ha kwenyere na ha kwesịrị ihe niile. Mgbe ihe mebiri, ha na -eme ihe ike na oke iwe.
Ndị a bụ ụmụaka nwere obere ọmịiko na enweghị mmetụta ọ bụla mgbe ha kpatara ihe mgbu na ndị ọzọ. Na gburugburu ezinụlọ, ha na -emekarị ndị mụrụ ha ihere na n'ụzọ mkparị.
Omume ụmụaka na -egbu egbu na -abụkarị ndị na -eme ihe ike ma na -ewe iwe. Ha nwere ike na -awakpo ụmụaka ndị ọzọ na nne na nna ha.
Àgwà ndị ọzọ a na -ahụkarị na ụmụaka na -egbu egbu bụkarị aghụghọ. Mgbe a bịara inweta ihe ga -abara ha uru, ha na -enwe ike ịmegharị onye ọ bụla.
Kedu ihe kpatara ụmụaka na -egbu egbu
Ọtụtụ ndị nne na nna na -eche ma nsị Ọ bụ ihe ebumpụta ụwa nye nwata ahụ ma ọ bụ ihe sitere na agụmakwụkwọ ọjọọ. Ọ nwere ike ime na omume a na -ekwesịghị ekwesị bụ n'ihi nsogbu echiche mkpụrụ ndụ ihe nketa n'ime nwa ahụ. N'aka nke ọzọ, kwuru na nsị nwekwara ike ịbịa site n'ụdị ozuzu nke ezughi oke. Nkụzi ndị nne na nna na -enye na -emetụta àgwà nwata ahụ.
Ọ bụrụ na a zụlitere nwata na gburugburu ebe na -egbu egbu, ọ bụ ihe dị mma na ka oge na -aga, obere na -amụta àgwà aka ike. Agụmakwụkwọ ga -esite n'ụkpụrụ dị iche iche na -enyere nwata ahụ aka ito eto ịkwanyere usoro iwu na ọrụ dị n'ime ụlọ ùgwù.
Na nkenke, ọrụ nne na nna bụ isi mgbe a bịara n'ịgbochi nwa ha ka ọ ghara ịmalite ịkpa agwa. A ga -eburu n'uche mmetụta uche mgbe ị na -ezi ma na -akụnye n'ime ha ụkpụrụ dị ka nkwanye ùgwù ma ọ bụ ọmịiko n'ebe ndị ọzọ nọ. Mmụta dị mkpa n'oge nwata ebe ọ bụ na n'ọgbọ a, ụmụaka na -akpụzi ma na -akpụ ụdị mmadụ ha. N'ihe banyere ịhụ agwa ụfọdụ na -egbu egbu n'ime nwatakịrị, ọ dị mkpa ka ndị nne na nna chọọ enyemaka nke ezigbo ọkachamara.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Ndị nne » Na-akụziri ụmụaka ihe » Otu esi amata nwata na -egbu egbu